AbaPhathi beProjekthi AbaPhicothi beeMviwo Iimpendulo - ITS Tech School
Abaphathi beProjekthi AbaPhicothi beeMviwo Iimpendulo
AbaPhathi beProjekthi AbaPhicothi beeMviwo kunye neempenduloUkufumana omnye umntu kwiqela kunokungabi mnandi-ukucacisa inxalenye malunga nokubetha isikhonkwane kwintloko. Awukwazi ngokwenene: Ngaba lo mntu uya kuthumela? Hlalana kunye neqela? Hlalani kwiinqununu ezifanelekileyo malunga nokusebenza? Kukho imibuzo eninzi-nangona ungabonakalisa ukukhanya kubo ngemibuzo echanekileyo.
Ukuthetha nokulawulwa kwamathuba kwiindawo ezivulekile yinto endiyifunayo ukuba ndiyenze kodwa andicinga ukuba ilula yayo. Ungayazi njani ukuba ubuze? Ngaphezulu, ungayisebenzisa njani into eqhelekileyo yokunika ithuba lomncintiswano ithuba lokuzibonakalisa ekukhanyeni okulungileyo kakhulu?
AbaPhathi beProjekthi AbaPhicothi beeNgxoxo
1. Yintoni ongayidingi ukuyikhupha?
2. Kwimeko apho kwakufuneka ulinganise ukulawulwa kokubanzi njengendlela obizwa ngayo, ukusuka kwi-1-10 ungayilinganisela njani?
3. Yintoni eyona nto ibaluleke kakhulu kumphathi wesigqeba ukuba enze?
4. Utyalwe ngakanani amandla okwenza imihla ngemihla?
5. Unokusebenza njani nabalandeli? Ungayijonga njani?
6. Ngeliphi ixesha ekugqibeleni ungayikhetha kwaye yintoni na loo nto?
7. Yintoni eyona nto ikhethekileyo yokukhetha okufuneka uyenze kuyo?
8. Yiyiphi inqobo oya kuthi uyayisebenzisa ukufumana umsebenzi wakho olandelayo?
9. Uye wavelisa njani iifom zokulawula iinkqubo kwi-firm firm yakho?
10. Ziziphi iindlela ezintsha zokucinga ezisetyenziswayo?
Ukongezwa kwile ndlela yinto elula yokuphikisa ukuphendula izimpendulo kwimibuzo ephakamileyo yemibandela enokuthi kukho iintlobo ezininzi zeencwadi malunga nokukhetha nokuthetha. Banexesha elininzi lokuziphendulela iimpendulo zabo, ngoko yonke into inokuvakalelwa njengento yokukhangela ibhotile.
Ndidibene nemibuzo yami yokuphendula i-10 yokubhalisa intloko. Ngexesha elilandelayo kufuneka ubhalise umntu kwiqela lakho leqela, kutheni ungazami ezinye zezi?
Enkulu ngenxa yokuba: Kukho izibambiso ezixhomekeke kwiingqesho asikhathalele, nangona ukwandisa abalawuli ngokuqhelekileyo bathabathe inkunzi kwimisebenzi abaye bayigxotha. Kukulungele ukuba netyekelo, nangona ufuna umntu ongakwazi ukuphendula kwiimfuno zeshishini kungakhathaliseki ukuba oko akusiyo isigqibo sabo esiphezulu sokusebenza.
Ukuphendula ngokukhawuleza: "Ndiza kwixesha lokukhetha izinto endikujongene nazo, kwaye ndifuna ngokwenene ukuba ndiyenze imithombo yeendaba eziphambili. Kulungile, ngaba bekutsho ukuba akunjalo? "
Eyona nto ivela phambili: Oku kuya kukubonisa indlela abaxabisa ngayo umsebenzi wabo nokuba ngaba bazibona behamba phambili kwi-PM. Buza ukuba sisiphi isizathu esivakalayo sokuba bathathe okokulinganisa.
Ukuphendula ngokukrakra: "Ndiya kubeka i-1 kumanqaku nje kuba ndiyenza nje ukuzalisa ixesha ngaphambi kokuba ndibe nomhlaba osemthethweni."
Eyona nto ivela phambili: Iya kukubonisa iimfuno zabo nokuba ingaba icinga ukuba yintoni umphathi oyintloko. Kuya kubonisa kwakhona ukuba ngaba lifanelekileyo lezenhlalakahle kwiqela lakho. Kwimeko apho unokugxininisa kwinkqubo kwaye bacinga ukuba into efunekayo ikulungele ukulungelelanisa kwaye uhlengahlengise ifomu njengoko uhambayo, mhlawumbi awuyi kufikelela.
Ukuphendula ngokukrakra: "Kulungile, kungenxa yecandelo lomlawuli, ngaba lithetha ukuthi akunjalo?"
Eyona nto ivela phambili: Oku kukunika uphawu lokuthi baqhuba njani umsebenzi wabo. Umntu ochitha yonke imihla kwi-PC unokufanelana nemeko yakho, okanye unokufuna umlawuli osebenzayo ophumayo kunye nokutyelela abathengi iintsuku ezininzi zeveki. Gcina ukhumbule ukuba bangasetyenziselwa ukufeza ukhetho olungelona lento abakwenzayo ngoku, ngoko xa usenokuva into engafanelekanga kwithuba olufunayo, ungawaphuli phambi kokuba uphando oku ngakumbi.
Ukuphendula ngokukhawuleza: "Facebook."
Eyona nto ibonisa ukuba: Ukulawula indlela kuthetha ukusebenza ngokugqithiseleyo nabantu abadala ngaphezu kwakho. Ukwandisa abalawuli benze njalo ngoku, oko kukubakho ukufumanisa indlela abenza ngayo ukudibanisa ukusebenza.
Ukuphendula ngokukhawuleza: "Ndiyathembele ekungenakufumana inkxaso yam. Bahlala bengenanto, ngoko andiyikhathazi. "
Eyona nto ivela phambili: Oku kuya kukunceda usebenze ngethuba lokuba bavuyiswe ukuba baphumelele kwaye bakufundise malunga nexesha elithile lenzeke kakubi. Oku kubonisa ukukwazi kwabo ukuzuza kwi-oversights kunye nendlela abalawula ngayo i-data-burden. Ukutyunjwa kwemisebenzi yomsebenzi kubaluleke kakhulu ekusebenziseni umsebenzi kwaye kuya kufuneka ufune isivumelwano somntu oqondayo.
Ukuphendula ngokukrakra: "Andizange ndibe ne-delegation-akufuneki ukwenza konke oko."
Eyona nto ivela phambili: Ingabonakalisa ukuqhelana kwabo ne-PMI Code of Ethics kwaye kungakhathaliseki ukuba ayinakucinga loo nto, indlela yabo jikelele yokujongana nomsebenzi. Ungayisebenzisa kwakhona ukuvula utshintsho olunomdla kwaye uvumele ukuba ugwebe indlela eya kufumana ngayo inkcubeko yakho.
Ukuphendula ngokukrakra: "Ndinike imvume kumzala wam kanye, nangona ukuba wayeyindleko kakhulu. Ndinexesha elihle lokukhangela. "
Eyona nto ivela phambili: Iya kukubonisa oko kubalulekile kubo emsebenzini: ukuqinisekiswa okuluhlaza, ukunyanzelwa komsebenzi, ukulungiswa komsebenzi / ubomi, ukusebenzela i-brand enkulu kunye njalo. Kuya kukwazisa ngokuqinisekileyo ukuba ngaba umsebenzi ophumelelayo ukuxosha okanye nokuba babone ukuphakanyiswa kwakho kwaye akunakukuphepha (nokuba kulungile).
Ukuphendula ngokukhawuleza: "Inkxaso, ilungiselelo leendleko kunye nethuba lokuhamba kwelinye ilizwe."
Inkulu ngenxa yezizathu zokuthi: Akubona wonke umntu unethuba lokuthabatha isiseko sezoshishino, izibonelelo ezinamandla ezenza iCV engaqhelekanga, nangona wonke umntu unethuba lokunika iziphakamiso ezimbalwa zenguqu (kungakhathaliseki ukuba akunjalo ukuba unyusiwe). Khangela umntu onengcamango kwaye onganqikazi ukuwabeka phambili.
Ukuphendula ngokukrakra: "Yonke into enhle ekhona apha kodwa andizange ndizame ukuhamba njengoko kungekho nto."
Eyona nto ivela phambili: Kuyafaneleka ukuvavanya ubuchule obukhethekileyo beethemba. Ngaba baya kuthetha ngokungazi kakuhle malunga neentlanzi zeentlanzi, i-De Bono i-caps, kunye na? I-Fan ukuphuma ukuxubusha umcimbi wokugqibela wokuba uhlalutye ngokucinga ngokucinga.
Ukuphendula ngokukhawuleza: "Ndinomdla wokunyamekela imiba ngokwam ngaphandle kokubandakanya iqela."
Isiqinisekiso se-PMP - Izizathu ze-10 zokufumana i-PMP Certification